China PET ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
PET ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်ကို ပေါင်းစပ်ဆံပင်ပုံစံ၊ ဆံပင်တုစတိုင်လ် ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်မည့် ဓာတု PET ဆံပင်ဆံပင်တု monofilament ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။
PET monofilament ၏ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် PET ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်သည် ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းစားသည်။ ဤစက်လိုင်းသည် လိုအပ်ချက်အလိုက် မတူညီသော ဆံပင်ချည်မျှင်အရွယ်အစား အကွာအဝေးကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် PET ဆံပင်ဖိုက်ဘာကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်လိုင်းသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆံပင်ဖိုက်ဘာကို အာမခံနိုင်သည့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ PET ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပဈေးကွက်နှစ်ခုလုံးတွင် အထူးသဖြင့် အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက်တွင် ကြိုဆိုကြသည်။
စက်လိုင်း၏လည်ပတ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ရထားနှင့် ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်သည်။ ကုန်ကြမ်းကျွေးခြင်းမှ နောက်ဆုံးချည်မျှင်ချည်နှောင်ခြင်းအထိ၊ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။
1. အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဓာတုဆံပင်အမျှင်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
4. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။
6. နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကြံဉာဏ်များ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
>> PET ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်
ယခင်- တရုတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်/PP တံမြက်စည်း Brush ဆံပင်/Monofilament/Bristle Extruder စက်လိုင်း
နောက်တစ်ခု: PP ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်